नेतृत्वलाई लाज भयाे कि भएन, तर मलाई एनआरएनए भन्न लाजै भाे
- दीपराज थापा | मंगलबार, चैत १५, २०७८
भर्खरै भएको एनआरएनए ग्लोबलको नेतृत्व पङ्क्तिको बैठकद्वारा भएको निर्णयले संसारभरि छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरू भन्नुमै लज्जास्पद हुने गरी तीन/तीनवटा अध्यक्ष र ११ जना उपाध्यक्ष गर्दै पचासौँको संख्यामा पदैपद ओगटेर सम्पन्न भएछ । सुन्नेलाई पनि लाज लाग्ला तर पदका आकांक्षी यी उम्मेदवारहरू पदीय लोभको माला लगाउँदै हार्दिक बधाई र शुभकामना भकाभक व्यक्त गरिरहेका छ्न् ।
म एनआरएनएमा संलग्न भएको र सदस्यता लिन थालेको पनि १३ वर्ष भइसकेछ । बाहिर बसेर नेपालको विकास, समृद्धिमा ठूलो भूमिका निभाउने भन्दै बाहिर नेपाली समुदायमा आफूलाई महाराजा सम्झिने एनआरएनएका नेतृत्वहरू नेपाल पुग्नेबित्तिक्कै लुरुलुरु मुसा बनेर कांग्रेस र कम्युनिस्टका माला लगाएर फेरि बाहिर फर्किएपछि हात्ती बन्ने प्रवृत्ति बिस्तारै विकसित हुँदैहुँदै विशेषत: पछिल्लो दशक एनआरएनए धमिलो बन्दै गएको विभिन्न नकारात्मक गतिविधिबाट प्रस्ट हुन्छ ।
राजनीतिक नाटक र नेपाली राजनीतिको हस्तक्षेप अघिल्लोचोटि हायात रिजेन्सीमा भएको चुनाव अनि जिन्दावाद र मुर्दावादको नारामा कांग्रेस र कम्युनिस्टको माला लगाएर सबैलाई देखाएको नाटकको प्रत्यक्षदर्शी नेपाली जन्ता पनि बन्न पुगे । तैपनि केही सुधार हुन्छ कि त, केही परिवर्तन हुन्छ कि त भन्ने आशा यसपटकको बैठकको निर्णयले चकनाचुर बनाएको छ ।
हास्यास्पद कुरो त के छ भने एनआरएनएको विधानअनुसार एनआरएनएको कुनै पनि नेतृत्व तहमा उम्मेदवार बन्न कुनै पार्टीको सदस्यता लिएको हुनु हुँदैन । तर, अहिलेको यो भागवण्डा पनि पूर्ण रूपमा राजनीतिक भागवण्डाभन्दा अरु केही हैन भन्ने देखिन्छ । हरेक राष्ट्र–राष्ट्रमा बुझ्दा धेरै ठाउँमा पदको भागवण्डा गर्ने हिसाबले उस्तै खाले लगाएको देखिन्छ । कांग्रेसलाई कांग्रेसकै अध्यक्ष हुनुपर्ने र कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्टकै अध्यक्ष हुनुपर्ने, भएन भने झै–झगडा र पद भागवण्डा गर्ने गराउने रणनीति सबैतिर लिएको देखिन्छ ।
नेतृत्वमा पुग्न पैसा र राजनीतिक खेल हुने गरेको छ । महाधिवेशनका क्रममा नेपालमा हुने खर्चचाहिँ विदेशमा बसेर काम गर्ने नेपालीहरूबाट, कि त सदस्यता, कि त सहयोग दान भनेर उठाएर तिर्ने गरिन्छ । विदेशमा र स्वदेशमा रहेका नेपालीहरूको समृद्धि र विकास भन्दै राष्ट्रका विभिन्न समाजसेवा, विकास र आर्थिक लगानी बढाउने मात्र नभई देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीहरूको हितका लागि कार्य गर्ने उद्देश्य बोकेर एनआरएनए अघि लागेको संस्था हो । यद्यपि विदेशिएका नेपालीहरूले यो संस्थामा नेतृत्व गर्नुपरे जम्मा दुईवटा कुरा नभई हुन्न– १. करोडौँको पैसा चलखेल गर्न सक्ने व्यक्ति २. राजनीतिक दलका नेताको झोला धेरै लामो समय बोकिसकेको व्यक्ति ।
यसो विश्लेषण गर्दै जाँदा ठ्याक्कै नेपालको राजनीतिज्ञको जस्तै परिभाषा, न शैक्षिकस्तरको भ्यालु छ, न स्वतन्त्र नागरिक भएर नेपालका लागि केही सीप विचार भएकाहरूको भ्यालु छ ।
अझ चुनावी जात्रा पनि नेपालको भन्दा कम हुँदैन । विदेशी भूमिमा आएर यिनै विदेशीहरूका अघि कुस्ती खेल्दै, हानाहान गरेर देखाउने गरेका नाटक त कति छ्न् कति । उही नेपालमा देखाइने रमिता, फलानो यस्तो फलानो उस्तो । म एनआरएनएलाई यस्तो बनाउँछु, उस्तो बनाउँछु भन्यो, जितेर गएपछि फेरि अर्को दुई वर्ष चुपचाप । विदेशमा आएपछि के सिके होलान् भनेर म छक्क पर्छु, यहाँका नियम कानुन, विचारको केही मतलब हुन्न हाम्रा नेतृत्व तह पदाधिकारीहरूलाई ।
यहाँ छुट्टै नेपाली समाज बनाइसकेका हुँदारहेछन् र त्यही समाजभित्रका केही मानिसहरूले माला झुन्ड्याइदिने र सम्मानपत्र दिने परिपाटी रहेछ । यसरी गरिएका अपराध र अनैतिकताका घटनाहरू पनि यही नेपाली समाजभित्रैबाट यताको कानुनी राज्यलाई सहित अत्तोपत्तो नदिई आफैँ पुलिस, आफैँ न्यायाधीश बनेर सामसुम पार्ने संस्कृति अँगालेका उदाहरण कैयौँ राष्ट्रमा छ्न् ।
राजनीतिबाट टाढा रहेर सबै नेपालीहरूलाई राम्रो बाटो देखाउन सक्नुपर्ने संस्था, विदेशमा सिकेका नयाँ विचार र सुसंस्कृत सभ्यताको सीप सिकाउनुपर्ने संस्था पटकपटक भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्य या राजनीतिक फोहोरमा भासिँदै गर्दा र पदको लोभ लालचमा लिप्त भएको देख्दा मलाई एनआरएनएको एक सदस्य भएकोमा लज्जा महसुस भएको छ ।
फेरि यो कुरा म नेतृत्वलाई मात्र भन्न चाहन्नँ, धेरैजसो विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संस्कृति र सभ्यताको परिचय नै यही बन्दै आएको छ । एनआरएनभित्र गढेको अर्को संस्कार हो– फूलमाला र सम्मान, अनि समय बर्बादीको संस्कार । आज नेपालमा धेरै बढेको संस्कार सम्मान र पुरस्कारको छ । सम्मान गर्ने नाममा सहभागीको नाम सम्बोधन गर्दै र सबैलाई माला र प्रमाणपत्र वितरण गर्दैमा घण्टौँ खर्च गरिन्छ । सकारात्मक कुरोचाहिँ दोसल्ला, प्रमाणपत्र र फूल बिक्रीचाहिँ राम्रो भएको छ । मेरो भर्खरै भएको नेपाल बसाइमा तीन/चारवटा कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाएँ, जुन राजनीतिक थिएन तर त्यहाँ पनि ११ बजे भनिएको कार्यक्रम ३ बजे सुरु भएको थियो ।
विदेशमा सायद सबैले सिक्ने कुरा समय र परिश्रम नै होला भन्ने लाग्छ । म मेरो अफिस ५ मिनेट ढिलो आएँ भने मेरो बोसले नकारात्मक रूपमा हेर्न सक्छ । मिटिङ १ मिनेटभन्दा ढिलो कहिल्यै सुरु भएको मलाई थाहा छैन । हुन पनि १ मिनेट ढिलो भयो भने यहाँ ट्रेन छुट्छ । ट्रेनलाई ढिलो आउने छुट हुन सक्छ तर मानिसहरूलाई त्यो छुट हुँदैन । १ मिनेट ढिलो आउनाले दिनभरिको काम नष्ट हुन सक्छ । १ मिनेट ढिलो आए प्लेन छुट्छ, टाढा तय गरिएको यात्रा रोकिन्छ । अझ बचेको समय काम गर्न खर्च गरिन्छ । यद्यपि एनआरएनएभित्र गरिने कार्यक्रमहरू र नेपालका कार्यक्रममा खासै भिन्नता देखिँदैन ।
यहाँ बसेर काममा बैठक हुँदा एकमुस्ट रूपमा सबैलाई स्वागत गरिन्छ र सिधै एजेन्डामा प्रस्तुत हुने गरिन्छ । तर, यी देशमा काम गरेर नयाँ देशका संस्कृति र सभ्यता सिकेका हाम्रा नेतृत्व, एनआरएनएको बैठक या वार्षिक उत्सव या चाडपर्व मनाउने कार्यक्रम भयो भने आसन ग्रहणबाट सुरु गर्छन् । बैठक या कार्यक्रमको अध्यक्ष चुन्नुपर्‍यो, प्रमुख प्रतिनिधि, वर्तमान र पुराना पदाधिकारीहरूको आसन ग्रहण गर्नु पर्‍यो, अनि स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुपर्‍यो, ठूलाठूला भाषण सुन्नुपर्‍यो अनि बिस्तारै कार्यक्रम सक्किन थालेपछि प्रमाणपत्र र सम्मान वितरण हुनुपर्‍यो । यो विचलन दसैँतिहार मनाउँदा गरिने कार्यक्रममा पनि यस्तै ढाँचा कोरिएको पाइन्छ ।
मैले युरोपका १०-१५ वटा देश घुम्दा, अनि अमेरिका भ्रमण गर्दा त्यहाँका नेपालीहरूलाई नेपालीहरूबीचको सम्बन्ध, मेलमिलाप अनि एनआरएनएभित्रको सांगठनिक अवस्था बुझ्ने गर्छु र सबैचोटि नै जवाफमा खत्तम छ, झैझगडा छ, कुटाकुट छ, विवाद छ भन्ने सुन्छु ।
कैयौँ राष्ट्रमा त नेपालीले नेपाली देख्यो कि लुक्ने या नदेखेको जस्तो गरेर हिँड्ने संस्कृति नै विकास भइसकेको पाएँ । हाम्रो नेपाली समाजमा जस्तै खुट्टा तान्ने, कुरा काट्ने संस्कृतिको सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन भइरहेको मैले पाएँ, जुन धेरै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले भोगेको हुनुपर्छ । यमन श्रेष्ठले गाउनुभएको अनि मदनकृष्ण श्रेष्ठले रचना गर्नुभएको 'मुख र कान भेट भो कि' भन्ने गीतले अहिले पनि विदेशी मुलुकहरूमा त्यही झझल्को दिन्छ ।
त्यसैले एनआरएनएको नेतृत्वभित्र अहिले देखिएको चरित्रलाई 'बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्ग्यै' भन्ने भनाइसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । यसो भनिरहँदा सबै नेतृत्वप्रति मेरो असन्तुष्टि र दोषारोपण भने पक्कै होइन । एनआरएनएभित्र नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि मनदेखि लागेर राम्रो काम गर्न सफल व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ । एनआरएनएको देश निर्माण, समाज सेवा र नेपालमा लगानी भित्र्याउने कुरामा ठूलो देन छ भन्ने कुरा सबैलाई अवगत नै भएको कुरा हो । तर, राजनीति र पैसाले देखाएको यो फोहोरी खेलको गदगदी हिलोमा पसेका अहिलेको नेतृत्वले एनआरएनएको सत्कर्म र राम्रा सफल कार्यहरू पनि हिलो महिलो पारिदिने प्रमाण अहिलेको उदाहरणले प्रस्तुत गरेको छ । भनिन्छ नि धेरै कुहिएका आलुहरूमा रहेका शुद्ध आलुहरू पनि कुहिन थाल्नेछ्न् । स्वतन्त्र र पैसा कम भएका सक्षम व्यक्तित्वहरूको एनआरएनएमा न अवसर दिइन्छ, न त ती व्यक्तिहरू पद र सम्मानको माला लगाउन त्यहाँ सङ्घर्ष गर्न नै तयार छ्न् ।
(लेखक सिन्धुलीका हुन् र उनी विगत १७ वर्षदेखि स्वीडेनमा बसोबास गर्दै आएका छन्)
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १६, २०७८, १३:००:००